Falanqaynta Xogta Excel: ku taxliil xogta '...
Nidaamkan cookie-ka waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay 28/06/2021 wuxuuna khuseeyaa muwaadiniinta iyo deganaanshaha rasmiga ah ee sharciga ah ee Aagga Dhaqaalaha Yurub.
Boggeena, https://comme-un-pro.fr (hadda kadib: "shabakada") waxay isticmaashaa cookies iyo tikniyoolajiyadaha kale ee la xiriira (si fudud, farsamooyinkaan oo dhan waxaa loogu talagalay ereyga "cookies"). Kukiyada sidoo kale waxaa dhigaya dhinac saddexaad oo aan hawl galnay. Dukumintiga hoose, waxaan kugu wargelinaynaa adeegsiga kuukiisyada websaydhkeenna.
2. Waa maxay cookies?
Cookie waa fayl yar oo fudud oo lagu soo diro boggaga degelkan oo uu ku keydiyo biraawsarkaaga darawalka adag ee kombiyuutarkaaga ama qalab kale. Macluumaadka halkaas ku kaydsan waxaa dib loogu celin karaa server-keena ama server-yada dhinacyada saddexaad ee khuseeya booqashada xigta.
3. Waa maxay qoraalku?
Qoraalku waa qayb ka mid ah koodhka loo isticmaalo in lagu sameeyo websaydhkeenna si habboon oo is-dhexgal ah u shaqeeya. Koodhkan waxaa lagu fuliyaa adeegeena ama qalabkaaga.
4. Waa maxay sumad aan muuqan?
Iftiin aan la arki karin (ama beacon web) waa qayb yar oo ka mid ah qoraal ama muuqaal aan la arki karin oo ku jira websaydh, loo adeegsado in lagu raaco taraafikada bogga. Si tan loo sameeyo, xog kala duwan oo adiga kugu saabsan ayaa lagu kaydiyaa iyadoo la adeegsanayo taaga aan muuqan.
5.1 Kukiyada farsamada ama shaqada
Kukiyada qaarkood waxay hubiyaan in qaybo ka mid ah websaydhku si sax ah u shaqeeyaan iyo in dookhyadaada isticmaale ahaan la tixgeliyo. Adoo ku dhejinaya kukiyada shaqeynaya, waxaan kuu fududeyneynaa inaad soo booqato degelkeenna. Sidaa darteed, uma baahnid inaad geliso isla macluumaadka si isdaba-joog ah markaad booqanayso degelkeenna iyo, tusaale ahaan, walxaha waxay ku sii jiraan gaadhigaaga wax iibsiga illaa lacag-bixintaada. Waxaan ku dhejin karnaa kukisyadan adiga oo aan ogolaan.
5.2 Kukiyada tirakoobka
Maaddaama tirakoobka si qarsoodi ah loola socdo, wax oggolaansho ah looma oggola sidaas darteed in la dhigo cookies-ka tirakoobka.
5.3 Kukiyada xayeysiinta
Websaydhkan waxaan ku isticmaalnaa cookies-ka xayeysiinta ah, oo noo oggolaanaya inaan dulmar guud ku sameyno natiijooyinka ololaha. Tan waxaa loo sameeyaa iyadoo lagu saleynayo astaan ​​muuqaal aan ku abuurnay anagoo ku saleyneyna dhaqankaaga https://comme-un-pro.fr. Kukiyadahan, adigu, booqde degel ahaan, waxaad kuxirantahay aqoonsi u gaar ah, laakiin buskudyadan kama sheekaysan doonaan dhaqankaaga iyo danahaaga adeegga xayeysiinta shaqsiga ah.
5.4 Suuq-geynta / raadinta cookies
Kukiyada suuqgeynta / raadraaca waa cookies ama nooc kale oo keyd ah oo maxalli ah, oo loo isticmaalo in lagu abuuro astaamo isticmaale si loo soo bandhigo xayeysiin ama loola socdo isticmaalaha websaydhkan ama degello badan oo ujeeddo kasta leh.
Sababtoo ah buskudyadan waxaa lagu calaamadeeyay inay yihiin raadraac cookies, waxaan ku weydiisaneynaa rukhsad inaad dhigato.
6. Kukiyada la dhigo
Tirakoobka (aan la aqoon)
Waxaan u isticmaalnaa Matomo tirakoobka bogga. Akhri wax dheeraad ah
Xogtaan lama wadaagayo dhinacyada saddexaad.
Ku kaydi aqoonsi adeegsade gaar ah
Ku kaydi aqoonsi kalfadhi gaar ah
Kaydso Aqoonsiyada gudbiyaha
Waxaan u adeegsanaa Complianz maamulida oggolaanshaha cookie-ga. Akhri wax dheeraad ah
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Bayaanka asturnaanta ee Complianz.
Go'aanso calaamadaha buskudka ay soo bandhigayso
Kaydi doorbidyada oggolaanshaha cookie-ga
Kaydi haddii fariin la iska indhatiray
Ku kaydi aqoonsiga siyaasadaha 'cookies' ee la aqbalay
Divi (Mawduucyo xarrago leh)
Ujeedada baaritaanka la sugayo, Ficil ahaan
Waxaan u adeegsaneynaa Divi (Mawduucyo Elegant) naqshadeynta bogga. Akhri wax dheeraad ah
Ujeedada baaritaanka la sugayo
et-editor-la heli karo-post- *
Waxaan u adeegsannaa Tifatiraha ET naqshadeynta bogga. Akhri wax dheeraad ah
Waxaan u isticmaalnaa Xiriirinta 'Pretty Links' maaraynta maaddada. Akhri wax dheeraad ah
Waxaan u isticmaalnaa Yandex Metrica tirakoobka shabakada. Akhri wax dheeraad ah
Tirakoobka, Baadhitaanka la sugayo Ujeedada
Waxaan u isticmaalnaa Wistia muujinta fiidiyowyada. Akhri wax dheeraad ah
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Bayaanka gaarka ah ee Wstia.
Kaydi haddii isticmaaluhu uu arkay waxa ku dhex jira
Wadaagista xogta ayaa waxaa ku socda baaritaan
Markaad booqato degelkeenna markii ugu horreysay, waxaan ku tusi doonnaa daaqad pop-up ah oo leh sharaxaad ku saabsan cookies. Isla marka aad gujiso "Badbaadinta dookhyada" waxaad noo fasaxaysaa inaan isticmaalno qaybaha buskudka iyo kordhinta ee aad ku dooratay daaqadda soo-baxa, sida lagu sharxay siyaasaddan cookie-ka. Waad ka joojin kartaa adeegsiga 'cookies' adoo adeegsanaya biraawsarkaaga, laakiin fadlan ogow in websaydhkeennu uusan u sii shaqeyn doonin si habboon.
7.1 Maamul goobaha ogolaanshahaaga
8. Xuquuqdaada ku saabsan xogta shakhsiga ah
Waxaad leedahay xuquuqda soo socota ee ku saabsan macluumaadkaaga shakhsiyeed:
Waxaad xaq u leedahay inaad ogaato sababta macluumaadkaaga shakhsiyeed loogu baahan yahay, waxa ku dhici doona iyo muddada la hayn doono.
Xuquuqda helitaanka: waxaad xaq u leedahay inaad marin u hesho xogtaada shaqsiyeed ee nala ogyahay.
Xaqa sixitaanka: waxaad xaq u leedahay wakhti kasta inaad dhammaystirto, saxdo, in macluumaadkaaga shakhsiyeed la tirtiro ama la xannibo.
Haddii aad na siiso oggolaanshahaaga si loo farsameeyo xogtaada, waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto oggolaashaha oo lagaa masaxo macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Xaq ayaad u leedahay inaad ku wareejiso xogtaada: waxaad xaq u leedahay inaad ka codsato dhammaan xogtaada shakhsi ahaaneed kantaroolaha iyo inaad si buuxda ugu wareejiso kantaroole kale.
Xaqa diidmada: waad diidi kartaa habsami u socodka xogtaada. Waan u hoggaansameynaa, haddii aysan jirin sababo daaweyn ah mooyee.
Si aad u adeegsato xuquuqdan, fadlan nala soo xiriir. Fadlan tixraac faahfaahinta xiriirka ee salka hoose ee nidaamka 'cookies'. Haddii aad wax cabasho ah ka qabto habka aan u shaqeyno xogtaada, waxaan jeclaan lahayn in nala soo socodsiiyo, laakiin waxaad kaloo xaq u leedahay inaad dacwad u gudbiso hay'adda kormeerka (hay'adda ilaalinta xogta, sida EDPS).
9. Firfircoonida / barkinta oo tirtir cookies-ka
Waxaad u isticmaali kartaa biraawsarkaaga internetka si otomaatig ah ama gacan ku tirtirista cookies. Waxa kale oo aad cayimi kartaa in cookies-ka qaarkood aan la dhigi karin. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad bedesho goobaha shabakadaha internetka si aad fariin u hesho markasta oo cookie la dhigo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan xulashooyinkaan, eeg tilmaamaha ku jira qaybta Caawinta biraawsarkaaga.
Fadlan ogow in websaydhkeenu aanu si fiican u shaqeyn karin haddii dhammaan cookies-ka ay naafo yihiin. Haddii aad tirtirto cookies-ka biraawsarkaaga, mar labaad ayaa la dhigi doonaa ka dib oggolaanshahaaga ka dib markaad ku soo noqoto degelladayada.
10. Faahfaahinta xiriirka
Wixii su'aalo iyo / ama faallooyin ah ee ku saabsan siyaasadeena cookie iyo bayaankan, fadlan nala soo xiriir adigoo isticmaalaya faahfaahinta xiriirka soo socda:
E-mail : tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Lambarka taleefanka :.
Nidaamkan 'cookies' ayaa lagu waafajiyay cookiedatabase.org 24 / 01 / 2022
isgaarsiinta qoraalka iyo hadalka - tababar bilaash ah (14) xaq u (161) Tababar bilaash ah oo shaqsiyeed iyo mid xirfadeedba (49) Tababbarka bilaashka ah ee ganacsiga (81) Tababar bilaash ah oo Excel ah (33) Tababar xirfadeed (104) tababbarka maaraynta mashruuca (15) tababarka bilaashka ah ee ajaanibta (9) Hababka iyo tallada luqadaha qalaad (22) Tababar software iyo barnaamijyo bilaash ah (20) Qaabka xarfaha (19) mooc (171) google qalab tababar bilaash ah (14) Tababbarka bilaashka ah ee PowerPoint (13) Tababar ku xayeysiinta dukaamada (72) Tababar lacag la’aan ah (13)